Akụkọ - Nlekọta maka iji ogwe mgbidi mpụga
Mgbe ị na-ejikwa ogwe mgbidi dị na mpụga na ibudata na ibudata ogwe mgbidi dị n'èzí, a ga-eji ogologo ogologo nke ogwe ahụ mee ihe dị ka akụkụ nrụgide, a ga-ejikwa nlezianya dozie ogwe ndị ahụ iji zere nkwekọrịta na mmebi nke ogwe ndị ahụ;
Mgbe ị na-ejikwa otu mpempe akwụkwọ, a ga-akpali mpempe akwụkwọ ahụ kwụ ọtọ iji zere nrụrụ nke mpempe akwụkwọ ahụ.
Isi ala nke njem pụtara ga-adị mbadamba, ma a ga-edozi mgbidi mgbidi dị n'èzí mgbe ị na-ebugharị ya iji zere mmebi ngwaahịa n'ihi oke njigide nke ogwe mgbidi mpụga n'oge idozi;
Belata vibration n'oge njem iji gbochie nkukota na mmiri ozuzo.
Ọnọdụ maka ịtụkwasị ogwe mgbidi dị n'èzí kwesịrị ka ikuku ikuku ma kpọọ nkụ, saịtị ahụ ga-adịkwa larịị ma sie ike;
Mgbe ị na-eji ọdụ ụgbọ osisi square, gbaa mbọ hụ na ngwaahịa ahụ agbanweghị;
Mgbe etinyere n'èzí, a ga-eji ákwà mgbochi mmiri kpuchie mgbidi mpụta ahụ;
Mgbe ị na-echekwa ogwe mgbidi dị n'èzí, a ga-edebe ha site na okpomọkụ dị elu na ebe dị elu iru mmiri, ma agwaghị ya na ihe na-emebi emebi dị ka mmanụ na kemịkal.
Mgbe ị na-emepe ngwugwu mgbidi dị na mpụga, ị ga-ebu ụzọ tọgbọ ya, ma tọpụ ya site na ngwugwu ngwaahịa ahụ, ma wepụta mbadamba ahụ site na elu ruo na ala;
Emeghela ogwe mgbidi dị n'èzí site n'akụkụ iji zere ịchacha na panel.
Mgbe ebipụchara mgbidi mgbidi dị na mpụga, a ga-etinye ihe mkpocha ígwè na elu na mbepụ nke ogwe ahụ, nke dị mfe nchara. E kwesịrị iwepụ ihe ndị e debere na ígwè.
N'oge a na-ewu ihe, ekwesịrị itinye uche iji kpuchido ihu nke mbadamba mgbidi mpụga iji zere ọkọ na mmetụta.
Zere ịrụ ụlọ mgbe mmiri na-ezo;
N'oge usoro ihe owuwu ahụ, gbochie ime nke ogwe mgbidi dị n'èzí site na ịkpọtụrụ mmiri iji gbochie mmiri dị n'ime ka ọ ghara ịpụ site n'elu, na-akpata nchara na nchara n'elu elu nke panel ahụ, na-ebelata ndụ ọrụ ya.
Zere iji ya na oke okpomọkụ, oke iru mmiri, na ebe a na-agbapụta acid (dị ka ụlọ ọkụ ọkụ, ime ụlọ ọkụ, mmiri na-ekpo ọkụ, igwe mpempe akwụkwọ, wdg).
Maka ụgbọ okporo ígwè na-apụta site na mgbidi ahụ, ọkpọkọ mgbidi nke ikuku oyi na ọkpọkọ condensate, akụkụ ndị kwekọrọ na ya kwesịrị idobe tupu efere efere. Emeghela oghere mgbe echichi nwụnye.
Ọ bụrụ na enwere ndị otu na-akwado ya maka ndị na-ahụ maka ikuku, ebe a na-ekpochapu ya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'elu mgbidi ahụ, ekwesịrị ịgbado ọkụ eletriki na usoro ndị ọzọ tupu etinye ihe mkpuchi mgbidi na ihe mkpuchi.